MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE PEKEPOO IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Pekepoo iyo Sawirro
Eyga Pekingese / Poodle isku dhafka ah
Guido the Peek-a-poo markii uu jiray 3 sano
Poo iyo Poo
Peek-a-poo maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Pekingese iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine-ka Mareykanka = Peke-A-Poo
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naadiga Neefta = Peke-A-Poo
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Peekapoo
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Peke a Poo
Guido the Peek-a-poo eey
'Kani waa eeygayga, isku darka Pekingese iyo Poodle. Magaciisu waa Gizmo waana 8 jir sawirkaan ka muuqda. Waxaan jeclahay in timihiisu gaabnaadaan sidaa darteed wuxuu aadaa isla tima jaraha (tan iyo markii uu ilmo ahaa) 4-tii toddobaadba mar bilaha xagaaga iyo 6 toddobaad ee bilaha jiilaalka. Markii uu yaraa ee uu aadayay halkaas, gabadha timo jaraha ayaa u akhrisan jirtay buug kadib markay ka soo baxdo dugsiga si looga ilaaliyo inuu u ooyo ilaa aan ka soo qaado. Waa wiil hooyadiis! Meel walba wuu iga raacaa. Qoyskeygu way ka xanaaqsan yihiin isaga (iyo kuwa kaleba) maxaa yeelay waxbay ku odhan doonaan ama waxay isku dayi doonaan inay ku kalifaan inuu wax qabto oo isagu ma aqoonsado ama xitaa wuxuu u fiiriyaa jidkooda inaysan jirin. Markii aan u lugeeyo (oo uu ogyahay inuu tagayo markaan ereyga dhaho) waa inuu ku xirnaadaa xadhigiisa afkiisa. Had iyo jeer waad ogtahay inuu daallan yahay maxaa yeelay wuxuu seexanayaa midigta - inay tahay daankiisa qolka qoyska ama sariirtiisa qolka jiifka. Mararka qaar waxaan u maleynayaa inuu qeyb ka yahay bisad maxaa yeelay markaan safar galno ayuu qoorteyda fuulaa oo uu ku jiifsadaa inta u dhexeysa qoorteyda iyo kursiga. Isagu waa eeyga ugu fiican. Qof walba isaga ayuu doonayaa. Waxaan u keenay shaqadiisa oo wuu ila joogaa dhinacayga. Wuxuu joogayaa xafiiskeyga ilaa aan ka baxayo wuuna i raaci doonaa meel kasta oo aan aado, sida xabagta oo kale. In kastoo, markasta oo aan ku qaato dadka ay mar walba ii sheegaan inuu u baahan yahay xarig dartiis qaniinyadiisa awgeed. Waxaan u sheegayaa sida uu gabdhaha ku helo. Meel kasta oo aan geeyo isaga ayay dadku iigu deeqaan lacag aan ku iibsado. Si wanaagsan ayaa loo dhaqmay. Waxaan u kaxeeyey suuqa si aan sawirkiisa ula galo Santa Claus wuxuuna ku dhammaaday inuu ku jiro bogga hore ee Lansing State Journal. Wuxuu jecel yahay in sawirkiisa laga qaado. '
'Tani waa nasiib markii aan helnay ... waxaan u maleynayay inuu yahay eey midabkiisu yahay bunni khafiifa.'
'Tani waa Nasiib kadib LABA maydhasho iyo xiirashada dhow ee timaha, si looga takhaluso dhammaan wasakhda, boodada iyo timaha jajaban. Xaqiiqdii wuxuu isu beddelay eey cadaan yar oo cute ah! '
U hogaansanaadaan Peek-a-poo markay tahay 1 ½ sano jir
Queenie the Peek-a-Poo at 2 sano jir— Iyadu waa mid cayaareed, jecel socodkeeda waxayna xajisatay gawaarida arjiyada iyo midabaynta waalidkeed Pekingese. Waxaad horey u laheyd sawirro badan oo ah Peek-a-Poos, laakiin sida aad ka arki karto sawirka Queenie, dhammaantood way ka duwan yihiin mid ka mid ah faa'iidooyinka isugeynta. Waxaa lagu koray guri gaar ah oo ku yaal Denver, CO. '
Koby the Pekeapoo
'Tani waa 10-sano-jirkeena Pekepoo, Maggie. Hooyaday ayaa u badbaadisay iyada oo ah kuup. Maggie waxay aadday walaalkay kadib markay hooyaday dhimatay. Mar dambe, ka dib markii dumaashiday dhimatay, walaalkay hoos buu u dhacayay (wuxuu lahaa 4 Poodles iyo Maggie) Waxaan keenay gurigeeda aniga oo wata. Iyadu waa gacaliso, xitaa xanaaq badan, waxay jeceshahay awowyaday. Weligeed cidna uma muujin gardarro. Waxay si fiican u qabataa eeyo kale oo leh cabbirkeeda iyo xitaa tan Shaybaarka / Adhijirka qas iyo saaxiibka weyn Dahab dahab ah . Waxay leedahay qaniinyo weyn laakiin waxay u tahay cutie noocan oo kale ah. Sawirkan waxaa la qaaday intii aan ku jirnay xerada taas oo ay runtii jeceshahay, waxayna ku boodaysaa fursad ay ku raacdo gaari raacid. '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Peek-a-poo
Sawirada Peek-a-poo 1
Sawirada Peek-a-poo 2
Sawirada Peek-a-poo 3
Liiska eeyaha Pekingese Mix Breed
basset hound Jarmalka adhijir isku jira
buur buur yaryar oo yar yar oo iib ah
feeryahan isku qasan bulldog american ah
nooca eey ahaa lassie
dib uhabeyn dahab ah iyo qasnado isku dhafan oo iib ah
jilicsan isku darka sarreenka dillaacsan
waa maxay bich poo